ဆေးဆရာဝန်များ / ကျောင်းသားများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေသောကျောင်းသား - Brain On Porn
ကို restart ကြသူဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ / ကျောင်းသားများအတွက်
ဤစာမျက်နှာကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအားဖြင့်ပြန်လည်စတင်ပါရှိသည်။ သင်တို့သည်ဤလင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖတ်နိုင်သည်။
အဘယ်အရာကိုသင်သိလိုပါသနည်း by RebootMD
Med ကျောင်းသား - nofap ကို4နှစ်ကြာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးငါဒီမှာနေဖို့
အသက် ၂၆ - ဆရာ ၀ န်သည်သူ၏“ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်” ကိုညစ်ညမ်းစေသောဆေးများဖြင့်ကုသပေးသည်
andrologist တစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့် SO ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တာကိုသဘောမပေါက်ရင်မကောင်းဘူး။
အဘယ်သူမျှမ legit လိင်၏နှစ်နှင့် PMO ၏နှစ်ကြာပြန်လည်ကောင်းမွန်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် - HOCD: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြစ်တွယ်နေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထွက်သရုပ်ဆောင်ခြင်း
စိတ်ရောဂါ (အသက် ၂၈ နှစ်) - တစ်ဦး methadone ဆေးခန်းမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ် reboot အသစ်လှုံ့ဆျောမှု
MedHelp အပေါ် Posted - by med_man
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်: porn - သွေးဆောင် ED & အစွန်းရောက် fetish porn
LINK - Nofap ဆရာဝန်၏အတွေ့အကြုံ
အသက် ၂၇ - ငါ ED သို့မဟုတ်အချိန်မတန်သေးသောသုက်လွှတ်မှုများကိုမခံစားရတော့ပါ။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အိပ်မက်၏မိန်းကလေးချိန်းတွေ့တယ်
အသက် (၂၅) နှစ် - ဆေးဆရာဝန်။ ငါလုံးဝစိုက်ထူခြင်းမရှိ, လိင်ကိုကြောက်, ငါ့မိန်းကလေးကြောက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအချိန်ရှိခြင်း & အလွန်ကြီးစွာသောလိင်ဘဝကိုမှသွား.
သွပ်များနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်
သွပ်များနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ် by ghazwan_wsb
ကျွန်တော့်နာမည်ကအလီဖြစ်တယ်။ ငါကဆရာဝန်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်၌ပြင်းထန်သော ED ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ရုပ်ပုံကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်မှစ၍ ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်ယင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အသည်းအသန်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပြင်းထန်သော ED ရောဂါခံစားနေရသည်။
ဒီအသုံးဝင်သောဖိုရမ်များကိုတွေ့နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ကကူညီခြင်းနှင့်လည်းအခြားလူကိုကူညီဖို့အကြှနျုပျ၏သုတေသနစတင်ခဲ့သည်။ ငါပြန်ဖွင့်ဖြစ်စဉ်ကိုငါ zinc ချို့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်သတိပြုမိသောဆေးပညာအရအရေးကြီးအချက်အလက်များထဲကတစ်ခုထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းတစ်ခုတင်သွင်းခြေလှမ်းကိုထည့်သွင်းဖို့ကဒီမှာပို့စ်တင်နေပါတယ်။
ဇင့်အများအပြားတုံ့ပြန်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးကိုပူးတွဲအင်ဇိုင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအရေးပါသောသတ္တုဖြစ်ပါသည်, ကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ကူညီပေးသည်ဒါပေမဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု, DNA ကိုပေါင်းစပ်, နယူးဆဲလ်တွေပေါင်းစပ်နှင့်လည်း Immune function ကိုပါဝင်သောအဓိကအားလှုပ်ရှားမှုများ။ သို့သော်အခြားအရေးကြီးသောအရာတစျခုယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုဖြစ်ပါတယ်
ဇင့်သုတ်ရည်မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နှင့် testosterone ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တွေလို့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဇီဝဖြစ်စဉ်များအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်, အနိမ့်ဇင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယောက်ျားအနိမျ့ testosterone အဆင့်ဆင့်ခဲ့ရပြီးအဖြစ်မကြာမီသူတို့3လကျော်ကာလအတွင်းကြောင့်အစားထိုးအဖြစ်ပြသကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုရှိပါတယ် သူတို့ (အံ့သြဖွယ်သောအရာ) testosterone ဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်အတွက် 92% တိုးသတိပြုမိသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီသုက်ကိုဆုံးရှုံးသွပ်၏မီလီဂရမ်3မှ5အကြောင်းကိုရှိသည်မယ်လို့ကြောင့်ဇင့်တဲ့ဧရာမငွေပမာဏဖြစ်ပြီး, ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဆိုစှဲလမျးသူများသောအားဖြင့်ဆင်းရဲသောသူသည်အစားအသောက်ရှိပြီးသူတစ်နေ့တာအတွင်းနှင့်နှစ်ပေါင်းတစ်ကာလအတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ cums အကြောင်း, ဒါကြောင့်ခန့်မှန်း ဘာ? ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇင့်အဆင့်ဆင့်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်မည်ဖြစ်ပြီး, အရှင်ဇင့်ချို့တဲ့ပေါ်ထွက်လာ။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသစ်တစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျနှင့်သိကောင်းစရာများပြဿနာ add ကြိုက်တယ်ကျန်းမာသောအစားအစာကိုရယူလိုက်ပါ, ကြာကြာယူတံ့သောအစားအစာအတူဒါမှမဟုတ် OTC အဖြစ်မည်သည့်ဆေးဆိုင်မှာရရှိနိုင်သောဖြည့်စွက်အတူဖြစ်စေသင့်ရဲ့သွပ်ကိုအစားထိုးမယ်လို့, သင့်အကြံပြုနေ့စဉ်လိုအပ်ချက် 10 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ်၏အမှု၌ သငျသညျမီလီဂရမ် 20 မှ 25 ၏တိုးမြှင်ထိုးရနိုင်မယ့်ချို့တဲ့, 25 ဟာ FDA ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကအများဆုံးခွင့်ပြုထိုးအဖြစ်တစ်နေ့လျှင် mg ထက်မပိုအစားထိုး။
အကျိုးသက်ရောက်မှုများတဖြည်းဖြည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ၏သင်တန်း, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှအတုလှုံ့ဆော်မှုအပေါင်းကျန်းမာသောအစားအစာမရှိညစ်ညမ်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ကပ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်သင်၏သိသာသည်အခြားသို့မဟုတ်မည်သည့်စစ်မှန်သောမိန်းမနှင့် rewiring ။
ဒါဟာ 10 နှစ်ပေါင်းကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဆို PMOing မပါဘဲတစ်လဖြစ်ရဲ့, ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရနှင့်ဇင့်ကိုကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းနှင့်ငါ့စိုက်ထူငါ၏အမိန်းကလေးကိုမှဒါပေမယ့်အာဏာ 40% နှင့်အတူဖွင်ခံရပြန်နံနက်တောအုပ်၏ form မှာလာမယ့်နေကြသည်ငါ၏အခြုံငုံတိုးတက် မေငါလေ့ကျင့်ခန်း PMOing, ရပ်တန့်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အစားအစာကိုစားခြင်း, သွပ်အစားထိုး, ငါ့မိန်းကလေးနှင့်အတူ rewiring အပါအဝင်ယူသမျှသောဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးကွာခြားချက်ရှိကွောငျးကိုပွောပွနိုငျသညျ။ ငါပဲပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးကိုယ့်ကပဲအောင်မြင်တဲ့ reboot ရှောက်သူယောက်ျားတွေထဲကအများစုဟာကဲ့သို့သောတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒါဖို့အချိန်တွေအများကြီး, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလအတွင်းယူမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။
ငါ 17 အခါ porn ကို အသုံးပြု. စတင်ငါနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် masturbate, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံထက်ပိုပါကကျနော်ရန်အသုံးပြုသော porn, နာရီ, Edging အခြားမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပြီး, တခါတရံတွင်ငါ Pmo'ing binge, စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုပေါ်မူတည် တူ, ဝါသနာရှင်များ, အစစ်အမှန်ကလူလိင်ဆက်ဆံနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများခံစားစောင့်ကြည့်နေပါတယ်, အစွန်းရောက်ဘာမျှငါသရုပ်ဆောင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဤအရာအလုံးစုံအတု Boob မုန်း၏။
ငါကဒါကိုအလေ့အကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သူနိုးပြီးအိပ်တော့တဲ့အခါမှာအလွန်သက်သာခြင်း (အတု) တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါဒါကို porn နဲ့တောင်မရနိုင်တော့တာသတိထားမိလာတယ်။ ဒီဟာကအရေးမကြီးဘူး၊ ငါအော်ဂဇင်ရှိပေမယ့် ၄၀% ခက်တယ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ lotion ကိုသုံးတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေရှိတယ်၊ ငါလည်းသေခြင်းတရားကိုခံနေရတယ်။
ကျွန်မနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားသောမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ငါတစ်လသို့မဟုတ်ဒါအတွက်စေ့စပ်တစ်ဦးဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံပေါ်တွင်အခြေခံခြင်းနှင့်ကိုယ်ထဲကနေလာဘယ်မှာငါမဆိုစစ်မှန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံ (ဈအပျိုကညာဖြစ်၏) ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါတဲ့ပါ၏။ ငါ့အဘို့ ((ဒီခေါင်းစဉ်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပြီးပေမယ့်) သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမယ့်, ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံနေကြတရှာတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် yeah ကဖွစျနိုငျအရမ်းရယ်ရတယ်ငါမိတ်ဆွေများနှင့်ပျော်ရွှင်ဘဝအများကြီးနဲ့တော်တော်လေးသာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်, ငါ့လူတန်းစား၏ထိပ် 10% ဖြစ်ကြောင်းကို ,) ဘဝကိုပျြောမှေ့တစ်ဂီတတူရိယာ play, run နှင့်တွေအများကြီးကူး။
အခုငါချစ်သောမိန်းကလေးနှင့်အတူရှိနေစဉ်သူမကငါနမ်းနေစဉ်အတွင်းသူနှင့်မပေါင်းသင်းခြင်းများမရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိသဖြင့်သူမကမေးခဲ့သည် !!!! ငါဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲ၊ သူမအရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုပြောနေတာကသူမဟာမတူညီတဲ့အရာတွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ သူမကငါ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောပြီးသင်ဟာငါကိုစွဲလမ်းမထားဘူးလို့သူမပြောတာကအသစ်တစ်ခုပါ။ အလုပ်သွားမယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကအဲဒီလိုမလုပ်တော့ဘူး၊ သူကငါ့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်သူမသည် sexy ခန္ဓာကိုယ်ရှိသောအလွန်လှပသောမိန်းမပျိုဖြစ်ပြီးယောက်ျားတိုင်းကသူမကိုအိပ်မက်မက်ကြသည်။ ငါသူမကိုနက်ရှိုင်းစွာချစ်သော်လည်းငါမပြနိုင်လောက်အောင်နာကျင်မှု! ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အမှန်တကယ်ရကြပါစို့၊ သင်၏အမျိုးသမီးကိုလှည့်ခြင်းသည်လူသားများလိုလားသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မိတ်လိုက်ရန်အသင့်ရှိခြင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအင်းဆက်ပိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါကမှားဖွင့်အဘယျသို့ငါလူငယ်တစ်ဦးကျန်းမာသောသူ, အဘယ်သူမျှမဆေးလိပ်သောက်မရှိအရက်, အဘယ်သူမျှမဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်မျှမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်၏အကြောင်းပြချက်ရှာသည် သွား. ?? နှင့်ဈ porn ပေါ်က်ဘ်ဆိုက်ကသင့်ဦးနှောက်ကိုတွေ့နှင့်တစ်ဦးကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုရာအရပျကို ယူ. ကိုယ့်ကိုသင်ယောက်ျားတွေနဲ့တူသမျှသောဤပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းကပြန်ပြောပြဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
ငါ 30 ရက်ပေါင်းကွာ PMOing မှယခုဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဟာတော့ဘူးတစ်ခု option ကိုမရမယ့်ကျွန်မရဲ့စေ့စပ်ရန်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးသူမအလွန်အထောက်အကူဖြစ်ပြီးသူမကငါ့ကိုပြင်ကိုကူညီသမျှသောလမ်းသို့သွားပါလိမ့်မယ်ပြောတယ်, ငါ recover လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကတိထားတော်, ဒါဟာင် ငါသောသူကဲ့သို့, ငါ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ငါ့အခြေခံစရိုက်လက္ခဏာသက်သေဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း bug ကိုအရှက်ကွဲစေခြင်း, ကဒါစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
ငါကပိုမကြာခဏလေ့ကျင့်ခန်း, ငါ၏အစားအသောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ငါပြန်လူတွေကိုချိတ်ဆက်ပျော်မွေ့, ငါမယ့်ကိုခက်ခဲ, ငါသည်အချို့သောနံနက်စိုက်ထူရတဲ့ငါ, ငါ၏စေ့စပ်နှင့်အတူ rewiring ငါပေမယ့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်, သွပ်ငါယနေ့ခေတ်ကြိုးစားနေဖြစ်ကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခုသည် သငျသညျယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုပုံပြင်များကြှနျုပျပျက်ကွက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးခဲ့သည်ဖတ်နေငါ porn ပယ်လမ်းပိုကောင်းခံစားရသည်။
LINK - Nofap ဆရာ ၀ န်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံ by HAKstar
ကျွန်ုပ်သည်ယူကေရှိအလုပ်များသောခရိုင်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံတွင်အငယ်တန်းဆရာ ၀ န်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်က nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါ2/ နေ့ကလူဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် fap မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရရှိခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုသာဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်များ -“ ဦး နှောက်မှေး” သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးဖြစ်စဉ်များကိုတိမ်တိုက်လွှမ်းမိုးနေသည်ကိုယခုပင်သတိပြုမိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံသဘောတရားများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နားလည်သည်။ ရှည်လျားသောညဆိုင်းအပြီးတွင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးရှုပ်ထွေးသောရောဂါများကိုကျွန်ုပ်ယခင်ကထက်ပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြီးရင်လူနာတွေက nofap ကနေအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိကြတယ်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု - ရှည်လျားသောအပြောင်းအလဲမရှိဘဲ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်တိုလွယ်ပြီးအထိခိုက်မခံသောသူ၏ပုံမှန်ဖြစ်သည့် - nofap အတွင်း၌ပင်ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်တိုလွယ်သောအရိပ်လက္ခဏာများကိုပိုမိုသိမြင်လာပြီးအနားယူရန်၊ သောက်ရန်၊ ရေအေး။ ရေကိုလျှော်ရန်၊ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာအောင်တွေးတောဆင်ခြင်ရန်ငါသိသည်။
အသံ - ဆရာဝန်များသည်ကောင်းသောဆက်သွယ်ပြောဆိုသူဖြစ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူနာများနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း (ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်အရ) ပင်ရှိသေးသည်။ ယခုကျွန်ုပ်၏အသံသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုရှိသည်ဟုထင်သည် - လူနာများသည်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်ကိုယခင်ကထက် ပို၍ နားထောင်လိုကြသည်။ အကြှနျုပျ၏ diction တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အသံလေသံပိုမိုနက်ရှိုင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်လက်ဟန်အမူအရာများကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလိုလားသည်။ တွေ့ဆုံမှုများသည်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားသည်ပွင့်လင်းလာသည်။ လူနာများ၏စိတ်ခံစားမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ sensitivity ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်မှုကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။
ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံ - ကျွန်ုပ်၏အနံ့ခံခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သည် - ကျွန်ုပ်၏အနံ့နှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးသည်အလွန်အမင်းကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။ ငါ့ရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ကြားရတာကလည်းအနည်းငယ်ပြတ်သားတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ခြောက်ဆယ့် 'doc' အသိကလည်းတိုးတက်လာပါတယ်။ လူနာတွေပိုမြန်တာနဲ့လက်ချောင်းကိုမြန်မြန်သွင်းတာကိုငါပြောနိုင်တယ်။
အကြှနျုပျ၏လက်တွေ့စာမေးပွဲကျွမ်းကျင်မှုရလဒ်အဖြစ်ပြတ်သားဖြစ်ကြသည်။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုအိပ်ပျော်ရာပိုကောင်းသည်းခံစိတ်, လေ့ကျင့်ခန်း, ပိုကောင်းတဲ့စစ်မှန်သော Self-ယုံကြည်မှု, ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်များတည်ငြိမ်မှု, အသံပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုပိုမိုသြဇာနှင့်လူမှုရေးအရအစွမ်းထက်, သာ. ကြီးမြတ်အလိုတော်နှင့်အကတိသစ္စာ, ပိုကောင်းတဲ့ memory ကိုသီဆိုနေတုန်း: အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာအလုပ်၏အပြင်ဘက်အခြို့သောအကြိုးခံစားခှငျ့။
တခြားဆရာဝန်တွေ၊ ပညာရှင်တွေအတွက်တော့ nofap ဟာ nobrainer ပါ။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမည့်အရာများကိုမျှော်လင့်လျက် - ဤစိန်ခေါ်မှုမှ ၂ ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏အလေ့အကျင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်
အားဖြင့် REPLY TCOB21516 ရက်ပတ်လုံး
အရမ်းကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ၄ နှစ်မြောက်ဆေးကျောင်းသားဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က nofap ကျောင်းတက်ကတည်းကဘုတ်အဖွဲ့ကြီးစာမေးပွဲအတွက်လေ့လာနေခဲ့ပြီးအခုလူနာတွေနဲ့အလုပ်ပြန်လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ မင်းပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကိုငါဆက်စပ်နိူင်တယ်။ ပြီးတော့သင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုမင်းပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ပို့စ်တင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စိတ်ရောဂါအထူးကု (အသက် ၂၈ နှစ်) - တစ်ဦး methadone ဆေးခန်းမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ် reboot အသစ်လှုံ့ဆျောမှု
၂၀၁၃ ဇွန် ၁၈ ရက်၊ ishouldreallyknowbetter
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ 28k modem နှင့်မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းသည်အရာဝတ္ထုများကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကစတင်ခဲ့သည်။ ငါ့မှာစွဲလမ်းနေတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိတယ်ဆိုတာသေချာတယ်ဆိုတာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတစ်နေ့ကို 56-5 ကြိမ်ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံတွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါထွက်သွားသောအခါငါကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူခဲ့ပါတယ်။ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပင်ကိုစရိုက်ကစျေးပေါတယ်, ဒါကြောင့်ပြည့်တန်ဆာ / ချွတ်ကလပ်သို့ဘယ်တော့မှသွားဘူး။
ငါအိမ်မှာကွန်ပျူတာဘယ်တော့မှရန်ငါ့လမ်းထဲကထွက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်ခုသာဝယ်တော့မှ ကောလိပ်ကျောင်းသွားပြီးတစ်နေ့ (သို့) နှစ်ကြိမ်စိတ်အတွေးများကိုသာသွားခဲ့သည်။ ငါလအနည်းငယ်တိုင်းမကောင်းတဲ့တွန်းအားတွေပေးခဲ့တာကြောင့်သူမအိမ်မှာ မရှိ၍ အွန်လိုင်းမသွားခင်အခန်းဖော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတွန့်တိုစွာတွန့်ဆုတ်နေတဲ့အတွက်ဒဏ်ငွေ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကိုခြုံငုံကြည့်ရင်တော်တော်လေးအကန့်အသတ်ရှိတာ၊ စောင့်ကြည့်ခံရတာဖြစ်လို့စွဲလမ်းမှုကအပြည့်အ ၀ မရောက်ရှိသေးဘူး
ထိုအခါငါ med ကျောင်းကိုသွား, 22 မှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးရည်းစားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူနှင့်ငါ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ PM ကျောင်းပထမနှစ်မှာအရမ်းအလုပ်များခဲ့တယ်၊ PMO အရမ်းများလွန်းသဖြင့်အရူးလုပ်ရန်အချိန်မရှိခဲ့ပါ။ ဒုတိယကျောင်း၏ဒုတိယနှစ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အရာအားလုံးသည်အချိန်ကုန်သက်သာခဲ့သည်။ ကွန်ပြူတာဓာတ်ခွဲခန်းထဲကိုကျွန်တော်ခိုး ၀ င်သွားတယ်။ သီးသန့်အခန်းတစ်ခန်းရတယ်။ တစ်နာရီချင်းနားနေတယ်။ ငါမကြာခဏအစီရင်ခံစာများရေးသားရန်သို့မဟုတ်မှတ်စုများယူရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါ 15mhz ပရိုဆက်ဆာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော 33 နှစ်အရွယ် ultra-oldschool laptap ဝယ်ယူခဲ့သည်။ မဲနှိုက်ခြင်းကအင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။ ဒီတစ်ခေါက်လောက်မှာကျွန်မရဲ့လက်ရှိရည်းစားနဲ့အတူလရောင်အပြာရောင်မှာ ED တစ်ချိန်ကအိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုမရှိခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုရှိမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အရာအားလုံးဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ ငါကတစ်နေ့ကို 4-5x လိင်ဆက်ဆံလေ့ရှိတယ်။
(ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်ရေးနေမှသာလျှင်ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုအတွက်ဤကဲ့သို့မျဉ်းဖြောင့်သို့မဟုတ်ထပ်ဆင့်တိုးတက်မှုပင်ဖြစ်ပုံရသည်။ )
၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျောင်းအိမ်ရာသည်အဆုံးသတ်သွားသောကြောင့်ကျောင်းပရ ၀ ုဏ်သို့ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ပေါက်ကွဲသောအီးမေးလ်များကိုပြန်ကြားရန်ကျွန်ုပ်တို့၌ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ Wayyyy PMO ပိုများတယ်၊ PIED နည်းနည်းများတယ်။ ငါခက်ခဲပြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ ငါဟာဒီလိုရန်လိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုရခဲ့သလဲဆိုတာကိုမြင်တော့ကျွန်တော်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ငါမကောင်းဘူးဆိုတာသိပြီးငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာနက်ရှိုင်းတဲ့အာရုံကြောအုတ်မြစ်တွေတပ်ထားတယ်။ ငါဒီမှာတစ်ပတ်ဒီမှာရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဘာမျှမတည်တံ့။ ကျွန်ုပ်သည် filter များကိုအရာအားလုံးပေါ်တွင်တင်သော်လည်းစကားဝှက်မေ့သွားခြင်း (သို့) ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ ကြိုးမဲ့ကဒ်ကိုလက်တော့ပ်အသစ်တစ်ခုမှာထုတ်ပြီးတောင်မှ usb wifi adapter ကိုရခဲ့တယ်။ မကောင်းဘူး ငါလူနှစ် ဦး နဲ့တူအလေးအနက်ထားခံစားရတယ်။ တစ်ခုမှာသနားစရာနှင့်အခြားပိုပြီးသနားစရာ။
သောကြောင့်ငါ့မိသားစုအတွက်ပိုက်ဆံကိစ္စများ၏, ငါ့ရှေးရှေး2နှစ်ပေါင်းပြန်သည်ငါနှင့်အတူအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါထင်ကြီး, ဒီကူညီပေးပါမည်။ ငါဧည့်ခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာထားတော်မူ၏။ ငါ့ကိုကုသပေးဖို့အရာအားလုံးကို၏မှောမျှော်မှန်းထားသည်။
မှား ငါညမှာအဲဒီမှာဆင်း snuck ။ PMO သည်အစောပိုင်းနာရီများအတွင်း ၀ င်လာပြီးနောက်တစ်နေ့တာတွင်နိုးနေရန်ကဖိန်းဆေးပြားကိုသောက်ခဲ့သည်။ ကောင်မလေးနှင့်အတူ PIED ပိုဆိုးလာ, ငါပိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မလုံခြုံနှင့် PMO ပို။ ပင်ရှာအံ့သောငှါရ။ ဒီတစ်ချိန်လုံးငါစိတ်ရောဂါပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးလူတွေနေ့စဉ်မက်သရူးနဲ့အရက်ကိုစွဲလမ်းနေသူတွေအကြောင်းကြားနေရတယ်၊ တစ်ချိန်လုံး ၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မတုန်မလှုပ်နိုင်သေးသောကျွန်ုပ်၏အသေးအဖွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူအရူးနှင့်အားနည်းနေသည်။
ငါနေတဲ့နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်ရဲ့တစိတ်တပိုင်းကငါ့ကိုမက်သဒုံးအစီအစဉ်ကိုတစ်လအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုတခြားပုံစံနဲ့ရအောင်လုပ်ပေးသလိုခံစားရတယ်၊ ငါဟာဒီလိုပဲခံစားနေရတုန်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာဘိန်းဖြူဖြုန်းတီးပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေခဲ့တဲ့အသက် ၅၀၊ ၆၀၊ ၇၀ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုတွေ့ရတော့ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ် ။
ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အမြဲတမ်း abstinence ကာလအတွင်းသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်အားနည်းခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါအရမ်းတောက်ပတဲ့ဖန်သားပြင်မတိုင်မီချွတ်တုန်လှုပ်စေသောအားလုံးသောအချိန်ဖြုန်း၏အလွန်နေမကောင်း။ ငါနူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီးတဲ့နောက်ငါ့ရည်းစားဘေးမှာအိပ်ရာဝင်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါ ဦး နှောက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးငါဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ၊ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိငါ့ခေါင်းထဲမှာညစ်ပတ်တဲ့ဇာတ်ကွက်တစ်ချောင်းကိုအစဉ်မပြတ်ပြန်ဆော့ဖို့ငြီးငွေ့နေတယ်။
ဒီ post ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆေးခန်းအကြောင်းပြောကောင်းပြောပေလိမ့်မည်။ သို့သော် YBR နှင့် YBOP သာဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့စ်များအားလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်ုပ်အားထိုအလုပ်မှထွက်ခွာသွားရန်စိတ်အားထက်သန်စေသည်။ အစဉ်အမြဲဒီမှာဒီမှာတင်ခဲ့သည်သူကိုလူတိုင်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းရဲ့အချိန်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားလေးစားပြီးမျှော်လင့်ခြင်းကငါ့လူနာတွေအားလုံးကိုငါ့အတွက်ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ 23, 2011
ယောက်ျားတွေမင်္ဂလာပါ! ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်.
ကျွန်မလိင်စိတ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအော်ဂဇင်မှာကျွန်ုပ် (၁၄) နှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါနမ်းခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမိန်းကလေးကအသက် ၁၃ နှစ်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာထူးဆန်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါဟာအငွေ့မရခဲ့ဘူး။ အစအ ဦး ၌၊ အင်တာနက်မရရှိချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တိပ်ခွေများ၊ နောက်ဆုံး DVD များဝယ်ယူလေ့ရှိသော်လည်းဤအမျိုးအစားများသည်များသောအားဖြင့်သင့်အားအင်တာနက်ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောအတွေ့အကြုံများကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ဥပမာ - အကယ်၍ မင်းရဲ့ ၀ တ်စုံသည်မိန်းမတစ် ဦး ၏မျက်နှာပေါ်တွင် cumming လုပ်ခြင်း၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိပါကသင်သည်မြင်ကွင်းသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ကိုခံစားရသည်။
ကောင်းပြီ, ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုနှင့်အတူဆက်လက်, ငါ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအခါတိုင်းငါ bonner ရရန်အသုံးပြုမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုနမ်း။ ငါ၏အနှောင်းပိုင်းတွင် 16s အတွက် (အမည်မသိမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ) ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစိတ်ထိခိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနောက်, ငါထို့နောက်ငါ 18 အခါရည်းစားရတယ်။ သူမ၏နဲ့ငါ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလည်းပျက်ကွက်ခဲ့ပေမယ့်လာမယ့်သူတွေကို (ကြှနျုပျတို့ရက်စွဲပါတပြင်လုံးကို7လအတွင်းကျော်) ဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ အရေးပါတဲ့သတင်းအချက်အလက်များမထိုးဖောက်သောအခါငါမရှိသလောက် cummed အကြောင်း, များသောအားဖြင့်ငါ့လက်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်မှာကျွန်မကျောင်းသင်ရတာခက်ခဲပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့အချိန်သိပ်နီးပါးမရှိခဲ့ဘူး။ ငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံအနည်းအကျဉ်းမျှသာကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါ (၁-၂ ကြိမ်) ခဲခဲသည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၂ နှစ်ရောက်သောအခါအခမဲ့ xvideos များတိုးပွားလာခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုပြင်းထန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မင်းစိတ်ကူးကြည့်လို့ရရင်ငါစိတ်ဒဏ်ရာပိုရစေတယ်။
ငါနင့်မိန်းကလေးများကိုနမ်းနေသည့်အချိန်၌ပင်ဘောနိုးမရှိခဲ့ပါ။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေ ၁၀၀% ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါ ED ရှိလို့မိန်းမတွေနဲ့အတူအခြေအနေတွေကနေရှောင်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ငါအသက် ၂၆ နှစ်ပြည့်ခါနီးအထိညစ်ညမ်းရောဂါကိုငါ့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းလို့သံသယဝင်လာတယ်။ ငါရေချိုးခန်းထဲမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အချိန်မှာငါအရမ်းခက်လို့မရဘူး၊ အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တဲ့အခါငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ညစ်ညမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုစိတ်ကူးခဲ့လို့ပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ Viagra ကိုတောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး (ဒါက porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ erectile dysfunction (PRED) ပုံမှန်အတိုင်းပါ။ ) လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လလောက်ကတည်းကငါဟာ porn ကိုမကြည့်တော့ဘဲမကြာခဏထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်မရဲ့အခြေအနေကိုယုံကြည်စိတ်ချပေမဲ့ကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်စွဲစွဲလန်းလန်းစွဲကိုင်ထားလို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကျွန်မအခက်တွေ့နေပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်၏နေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်“ အလွန်ခက်ခဲသော” အညွန့်မရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။ အလုပ်ပြီးအောင်ငါ့လက်တွေလိုတယ်။ ကောင်မလေးကပိုလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုငါပြန်မရနိုင်ဘူး။ PRED ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာကတော့ -
အကယ်၍ သင်သည်ဤညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်ဆိုပါကအများဆုံး ၃ လတွင်သင်သည်ပုံမှန်ဘဝပုံစံကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါတွေကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေရှိနေပြီးနောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားအမိန့်ကိုချိုးဖျက်လိမ့်မယ်။ ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါဆက်ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေမှာသေချာပါတယ်။
ငါနှင့်အတူငါ့အတှေ့အကွုံအချို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည် (ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဂဇင်သည် porn ကိုကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည် - ၎င်းသည်အလွန်ပင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံနှိပ်ခြင်း) သို့သော်တစ်နေ့နေ့တွင်သာမန်လိင်မှုဆိုင်ရာဘ ၀ ကိုရရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အခြားသူများကို porn ၏အန္တရာယ်ကိုသတိပြုပါ။
ဤနေရာတွင် Med ကျောင်းသား - permalink
ကမ္ဘာကြီးဟာ [porn ကို ED ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်း] ကမ္ဘာကြီးကိုဖမ်းစားနေတဲ့အတွက်အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်သည်မည်မျှညစ်ညမ်းသနည်း။ ငါ (အဘယ်သူမျှမ FAP အကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ပြီးနောက် 2015 နှစ်)2အထိ PIED ခံစားခဲ့ရ။ ငါနောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားခဲ့တယ်။ သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးကိုပြောပြတယ်၊ သူလိုငါလိုလူငယ်လေးတွေအတူတူပါပဲ။ သူကငါ့ကို viagara နဲ့ cialis နမူနာအထုပ်တွေပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့် PIED အတွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူး ၎င်းသည်ပဟေpieceိကို (urologists) အနေဖြင့်မည်သို့အတူတကွခွဲခြား။ မရနိုင်သည်ကိုထူးဆန်းသည်။ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်ငါပဟေtogetherိကိုအတူတကွလေ့လာနိုင်ခြင်းမရှိ။ yourbrainonporn.com နဲ့ nofap အကြောင်းငါတွေ့တာအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ဘဝဟာကောင်းတယ်။
ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး5နှစ်ပေါင်းကတည်းကညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ယခုတွင်ငါသည် 28 ဖြစ်၏။ ငါတူရည်းစားလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်သူမ၏နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ဈရိုးရှင်းစွာတော့ဘူး။ Viagra ၏အကူအညီနှင့်အတူအချိန်အများစု - ပြီးခဲ့သည့်4နှစ်များတွင်ကျနော်တို့လိင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 10 ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဤအခြေအနေကိုအမှန်တကယ်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့သည်။
ငါ porn မှ masturbate နိုင်ကတည်းကအရာရာကိုချအဲဒီမှာဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှစဉ်းစားမိတယ်။ ဤသည်ငါမှန်းဆ 1 နှင့်အတူစတင် 3-19 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ကိုပြု၏။ ငါအသေခံချုပ်ကိုင်အချို့ကိုမျိုးကိုအသုံးပြုနေပုံပါဘဲ။ ကိုယ်ကထိရပ်တန့်သောအခါအကြှနျုပျအဒစ်အားလျော့စက္ကန့်သွား၏။ ငါလိင်အိပ်မက်သို့မဟုတ်နံနက်သစ်သားမရှိခဲ့ဘူး။ သင်တို့ကိုငါနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးသကဲ့သို့ငါ့ကိုမယုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်: ငါ့ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး !!! ငါအကြီးအကျယ်ဦးနှောက်မြူ၌ရှိ၏။
နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ (နေ့က 28) ငါ့ရည်းစားငါ့ကိုလာတယ် ငါ flatline မှာရှိနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ သို့သော်ဘာမျှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ sexy နှင့် sweaty Girlfriend ကိုအနံ့ခံလိုက်ရုံဖြင့်ခက်သွားသည်။ ကျနော်တို့အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါအမှုအရာကလေးလေးနက်နက်စလာတဲ့အခါနောက်တစ်ခါအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြားချပ်ချပ်ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ပြီးစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဘူး၊ ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ချိန်ကမှပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။ ငါရည်းစားနှင့်ထပ်မံစကားပြောနေတုန်းပဲ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူမမထရပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာပြောပြခဲ့တယ်။ ငါတို့တစ်နာရီစကားပြောပြီးဖြစ်လို့မှော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မရဲ့လိင်တံကအရမ်းပြင်းလာပြီးကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။
ဤအချိန်တစ်ကြိမ်သာမဟုတ်ဘဲနှစ်ကြိမ်၊ ဤညနေခင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါအလွယ်တကူထနှင့်ပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်သူမ၏ပြန်ရနှင့်လိင်ဆက်ဆံဆက်လက်နိုင်ဘူး။ နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ မနေ့ကသူမလည်းငါ့ကိုထိုးနှက်ခဲ့ပြီးငါအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်မရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးကုန်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ လိင်မှုဆိုင်ရာစွမ်းအင်အားလုံးကို ၂၈ ရက်ကြာစုဆောင်းခြင်းသည်အထွing်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါမပြီးနိုင်သေးသော်လည်းယခုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်ကျေးဇူးတင်ပါဘုရား။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်တောအုပ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ဒါပဲ! ငါခရီးကိုဆက်သွားပြီးသင့်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ် ငါစတင်ခဲ့သည့်နေရာ၌ရှိသောသူအားလုံး (ကျွန်ုပ်သည်လက်တွေ့ကျသောအင်အားမရှိသော !!): Rebooting သည် 110% အလုပ်လုပ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ။ တချို့ကပိုကြာသော်လည်းသင်ကုလိမ့်မည် !! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အချိန်အကြာကြီးမယုံဘူး
စောစောပိုင်းက POST- သင့်ဆရာဝန်နှင့် Porn သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် - PIED
ငါဆရာဝန်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (လူငယ်တစ်ဦးတဦးတည်းပေမယ့်) ဖြစ်၏။ ငါဆရာဝန်တစ်မိသားစုကလာနှင့်သင်တန်း၏ငါသည်ငါ၏အလုပ်ကြောင့်အခြားအဆရာဝန်များကအများကြီးကိုသိ။ ငါမဆိုဆီးရောဂါပါရဂူများနှင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်မသိရပါဘူးဒါပေမယ့်အပေါငျးတို့သညျအခွားမဟုတ်သောလိင်-တိကျတဲ့ပညာတတ်ဆရာဝန်များအဘို့ငါသည်သင်တို့ကိုအာမခံနိုင်သည်အနည်းဆုံးငါ (အနောက်ဥရောပ) မှဖြစ်ကြောင်းကိုရှိရာနိုင်ငံအတွင်းရှိကြှနျုပျတို့သညျဤ PIED အကြောင်းသဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး:
ဤပြmနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ (ကုသမှုသည် reboot ဖြစ်သည်!) ။ ဤပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေသည်“ ပုံမှန်” ဆရာဝန်များ၏ရေဒါအောက်တွင်ပျံသန်းနေပုံရသည်။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်7နှစ်ကတည်းက PIED ပါပြီ! (ကိုယ့်ဇာတ်ကြောင်းကိုမကြာခင်ရေးမယ်) ငါ YouTube ပြကွက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီပြသနာကိုသိပြီး၊ ငါ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ထားတဲ့ yourbrainonporn.com ကိုထိမိခဲ့တယ်။
၂ ။ သူတို့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဖတ်ပါ။ reboot လုပ်ပါ။ https://www.yourbrainonporn.com/how-do-i-know-if-my-ed-porn-related-test
3 ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်နှံ့!
ဇူလိုင်လ 11, 2013, by RebootMD
မင်္ဂလာပါ။ ယခုဖိုရမ်များကိုကျွန်ုပ်ခဏတာဖတ်ရှုနေပြီးအကြံဥာဏ်များသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူပြုပါသည်။ နောက်ဆုံးမှာငါဟာ PIED ရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချဖို့ရှာဖွေခဲ့တယ်၊ YBOP နဲ့ဒီ site ကိုရှာဖွေဖို့အချိန်ပိုရခဲ့တယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာအသင်း ၀ င်အများကြီးရှိနေတုန်းပဲ၊ လူဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲ၊ ငါဘာကြောင့်နားမလည်တာလဲဆိုတာကိုငါစိတ်ကူးနိုင်တယ်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ၊ ဤပြissueနာသည်ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်များကြားတွင်ကျယ်ပြန့်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆီးလမ်းကြောင်းလေ့လာနေသည့်ဆေးကျောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး PIED နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနစီမံကိန်းနှစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပြုမှုများကြောင့် PIED သည်အဓိကကျသောဆွေးနွေးမှုပိုမိုဖြစ်လာပြီးချောနေသောဆင်ခြေလျှောကိုစတင်နေသောယနေ့ကလေးငယ်များကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်တို့ရှိသမျှကိုငါ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: PIED နှင့်ပတ်သက်။ ဘာကိုသိလိုပါသလဲ? ၎င်းသည်သုတေသနအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် urology၊ စိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်လွှမ်းခြုံထားသည်။
ကွဲပြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက် P ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားအသင်းအဖွဲ့
ပထမဦးဆုံးအ P ကိုအသုံးပြုမှုအသက်, PMO ၏ကြိမ်နှုန်း, ED ၏ပြင်းထန်မှုနှင့် reboot ၏အရှည်အကြားဆက်စပ်မှု
PIED ခံစားနေရသူတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI ဦးနှောက်ပုံရိပ်မြေပုံလေ့လာမှု vs. တစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု
စဉ်အတွင်းနှင့် reboot ပြီးနောက်မတိုင်မီ PIED ခံစားနေရသူ၏အမူအကျင့် / စိတ်ခံစားမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း,
ဆရာဝန်များကလူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းအများကြီးကိုသိသော်လည်း, အသိပညာ၏ပင်မရန်ပုံငွေအတွက်သေးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအချို့သောဖြစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ PMO နှင့် arousal စွဲ၏အန်တရာယျသေးခေတ်ရေစီးကြောင်းမရှိကြပေ။ ငါဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်းသူတို့ကိုငါအကြောင်းကိုကြားသိဒါမှမဟုတ်သူတို့ yourbrainonporn.com ကဲ့သို့ရှေ့ဆောင်များနှင့် nofap အသိုင်းအဝိုင်းများကအင်တာနက်ကိုအပေါ်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်သူတို့ဒါကြောင့်ကောင်းစွာဖော်ပြထားခဲ့သည်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ (ငါ့အဟောင်းရည်းစားကိုလည်းတစ်ဦးက MD လွန်းမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ) ငါသိခဲ့ပါအဘယ်သို့ငါမပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့မိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်ရငျးနှီးလာသောအခါပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
မှတ်ချက်ပေးရန်လင့်ခ် - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ
ငါသည်ဤပြောပါလိမ့်မယ် ... ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေ porn စွဲလမ်းသည်, ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းမှတတ်နိုင်သမျှစုဆောင်းခြင်းမှစိတ်သက်သာရာရခဲ့တယ် - ငါပိုရှာဖွေနေတဲ့အတွက်အစွန်းရောက်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါအမှန်တကယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့အရာအားလုံးဆီကိုဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုအခါငါ Straight porn ကနေသွား။ မှရဖို့ရန်လာမယ့်အကောင်းဆုံးအရာရှာတွေ့မှ - bisexual, လိင်တူချစ်သူ porn ကူးကူး။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီး၊ သူမ၏လိုအပ်ချက်များ၊ တိုးတက်မှုများကိုပုံမှန်လျစ်လျူရှုပါမည်။ ငါနောက်တဖန်ထွက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနိုင်ဘူး - ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာမှအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိဘဲငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ ခံနိုင်ရည်မရှိသည့်ကာလသို့မဟုတ်မအောင်မြင်ပါကငါအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပညာရေးနှင့်သမားတော်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပညာရေးနှင့်အတတ်ပညာအတော်အတန်ရှိသောကြောင့်ဤအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံဆောင်းပါးများစွာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ရှုခဲ့ဖူးသည်။ အော်ဂဇင်အချိန်ကာလ၌ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအမှန်တကယ် dopamine အလျင်အမြန်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။ သန္ဓေတည်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်သုတ်ရည်ထုတ်လုပ်မှုမရှိဘဲအော်ဂဇင်ရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်တွင်ခံစားနိုင်သည်။
ဒီစွဲလမ်းမှုမဟုတ်ရင် - ဒါကဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုဖမ်းမိတဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးကတခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူယုံလာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ BS အနုပညာရှင်တစ် ဦး သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် တွဲဖက်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်မပတ်သက်သောအကြောင်းများစွာကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်။
ကိုးလကြာ“ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး” အဖြစ် - ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်မဟုတ်၊ အထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါငါကြိုးစားရုန်းကန်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ငါကပိုစကားပြော; ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်အတူပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်အတူအော်ဂဇင်တစ်ခုထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Porn သည် ၂.၅ မှ ၃ နှစ်သာရှိသောကျွန်ုပ်၏ ဦး လေးနှင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အဖေ၏ပင်တဂွန်အိမ်တွင်နေထိုင်သည်။ ငါ၌သားသမီးလေးယောက်ရှိ၏။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျားများနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း။ အရမ်းလွယ်တယ် မျိုးဗီဇကငါ့ကိုစွဲလမ်းစေတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါမသိဘူး ငါသံယောဇဉ်တွယ်နေတဲ့ငါ့ရဲ့ကလေးတွေအားလုံးလူ့နှောင်ကြိုးကိုမအစားထိုးဘူးဆိုတာသတိပေးခဲ့တယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သဘာဝပင်။ ၎င်းသည်သဘာဝစူးစမ်းခြင်းမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများနှင့်အတူနံနက်စောစောထ။ စိုက်ထူခြင်းနှင့်ညအချိန်တွင်ထုတ်လွှတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကောင်းသောအခြေအနေမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်မှုဆိုင်ရာကိရိယာတန်ဆာပလာကြီးမဟုတ်ပါ။ ဒါကတကယ့်လိင်ကိစ္စကိုဘယ်လိုရောင်ပြန်ဟပ်သလဲ။ အကြံဥာဏ်များသည်လိင်ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်ကောင်းသော်လည်း၊ အစ၌မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ရည်ညွှန်းကိုးကားမှုစာရင်းကိုမှဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ဘဲဆရာ ၀ န်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုသာဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ငါကဒီမှာမှတ်မိမိတ်ဆွေများကိုမဆိုရည်ညွှန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေ ONE ဒေတာအချက်ကိုငါပေး၏။ Fortuna သည်ခိုင်လုံသောနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာခိုင်လုံသော၊ ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားအချို့ကို FosB နှင့်ဆက်စပ်ဖော်ပြသည် - ငါသဘောတူသည်။ ဦး နှောက်ထဲမှာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အတွက် - porn / masturbation စွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝသံသယမရှိပါ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုမှလူ့ထံမှအပြန်အလှန်ရွေ့လျားနေသည့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှသာ၎င်းအားပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
"ဒါကငါပြောစရာတွေအားလုံးပါပဲ။"- Forest Gump
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2013 အပေါ်အမည်မသိခြင်းဖြင့် Submitted
ငါဒီမှာမင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်၊ မင်းဒါမင်းကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုပါပဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီစာသားကိုလိုက်နာဖို့နောက်ခံနောက်ခံကိုရနိုင်ဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၇ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းနေကြောင်းမကြာသေးမီကသိရှိခဲ့ပြီးသူ၏ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ထိုအကျင့်ဆိုးများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ငါ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်။ PMO ကိုစွန့်ခွာတာကအဲဒီအပြောင်းအလဲရဲ့အုတ်မြစ်ပဲလို့ငါရိုးသားစွာယုံကြည်တယ်။ ငါဒီအပြောင်းအလဲတွေ (အထူးသဖြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ) အကြောင်းကိုသေချာချင်သောကွောငျ့, ဒီမှာ post ရန်ငါခဏယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီအဆုံးမှာတော့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်တော့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးရမယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ဇာတ်လမ်းလည်းသွားတယ်။ (အင်္ဂလိပ်အမှားတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ပါ)
သင်မခံစားရသည့်အချိန်တွင်သင်၏ဘ ၀ တွင်မှားယွင်းနေသောအရာများကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ငါဘာအမှားလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအခုကြည့်နေတယ်။ မင်းမြင်နေရတယ်၊ အပျိုဖော်ဝင်စကတည်းကငါဘဝကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီမှာဖတ်နေပို့စ်များကိုကြည့်လျှင်, သင်အများစုဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုရှက်သကဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါမပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်း / ကောလိပ်မှလူကြိုက်များသောယောက်ျားများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်အတူတကွဆော့ကစားလေ့ရှိသော်လည်း၊ ငါမကြိုက်ဘူး အပြင်မှာငါလုပ်နေသလိုမျိုးပုံဖော်ခဲ့ပေမယ့်လည်းစိတ်ထဲမှာမလုံခြုံမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ မောပန်းမှု၊ ငါဟာပညာတတ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် (ငါကဆရာဝန်ပေါ့) ငါကဘာကြောင့်ငါဟာ shit လိုခံစားခဲ့ရတာလဲ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ငါမင်းသမီးများနှင့်ငါ့အချိန်များခဲ့ပေမယ့်ငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်ခံစားခဲ့ရဟုပြောရပါမည် (ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအများစုကြောင့်သောကြောင့်ငါ့အဘို့မကျေနပ်ကြခဲ့ကြသည်)
ငါ့ဘဝမှာ NoFap (အမှန်တကယ်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ယိုစိမ့်မှု၊ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာငါတို့သိလိမ့်မယ်) ရဲ့စွမ်းအားကိုကျွန်တော်သိမြင်လာတာကအသက် ၂၀ y / o ဖြစ်ချိန်မှာကျပန်းအခိုက်အတန့်တစ်ခုလို့ငါယုံကြည်တယ်။ ငါ 20 ရက်ကြာ fap မဖြစ်ရပ်များကွင်းဆက်။ အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးရက် ၅ ရက်အတွင်းမှာငါကစူပါမင်းကြီးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှု၊ အပြုသဘောဆောင်သော၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်းခံစားခဲ့ရသည် (သင်သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်သည့်အခါမှော်များပေါ်လာသည့်ရလဒ်များ) နှင့် NoFap စုန်းမနှင့်အတူပါလာသည့်အခြား“ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ” အားလုံးသည်သင်ပြီးသားဖတ်ပြီးကြောင်းသေချာသည်။
ထိုအခါငါပြန် PMO တယ်, ငါ့ဘဝမှာနောက်ကျောပရမ်းပတာသို့ရောက်ကြ၏။
9gag ကိုကြည့်နေစဉ်“ Your Brain on Porn” အကြောင်းကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငါ့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ပြီးမအောင်မြင်နိုင်လို့ငါအဲဒီအချိန်တုန်းကအရမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ NoFap ၏ ၁၅/၂၀ ရက်ကုန်ဆုံးချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်နောက်တဖန်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့သီအိုရီဆိုင်ရာအသိပညာရှိခြင်းဟာအရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။
ဒီပို့စ်ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စာသားဖြစ်သွားစေမယ်၊ PMO ဆိုတာဘဝကိုစုပ်ယူတဲ့အရက်ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးလိုမျိုးပြတာပါ။ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကစူပါမင်းဖြစ်သွားတယ်လို့မထင်ဘူး၊ အဲဒါကို kryptonite ကိုဖယ်ရှားတယ်လို့မြင်တယ်။
ငါအခုချိန်မှာ porn ကိုဘယ်တော့မှမပေါက်သေးဘူး၊ မကြည့်ဘူးလား၊ ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မကတာသေချာတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ၆ လကျော်သွားပြီ။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ (ယခုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်သည်ပိုကောင်းလာသည်သာမကပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ) အများကြီးပိုလေ့လာနေပြီးပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အရိုးတွေ) ။ ပြီးတော့ငါထင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။
အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုက်သောနောက်ထပ်တစ်ခု။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အိပ်မက်၏မိန်းကလေးချိန်းတွေ့တယ်။ ငါချဲ့ကားပြောဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး၊ သူမဟာငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တုန်းကအပြင်းအထန်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ၊ သူမအခုတော့ကျွန်မရဲ့မိန်းကလေးပါ။ သူ့မျက်လုံးတွေနဲ့သူမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာသူဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုမြင်နေရတယ်။ ငါနှင့်အတူငါကဲ့သို့ငါနှင့်အတူယောက်ျားတွေ, ငါ့ကိုပြောပါစေ: ဤတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုပြန်ကြည့်မိတယ်။ ဆိုလိုတာကငါ ED သို့မဟုတ် PE ခံစားခွင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိန်းကလေးများ / လိင်ကိစ္စကိုမကြောက်တော့ဘူး။ ငါဒီဆက်ဆံရေးကိုအပြည့်အဝခံစားပြီးငါ NoFap ကိုစတဲ့အခါသင်ဖြတ်သန်းသွားရမယ့်ငရဲကကျိုးနပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ငါ PMO သည်သင်၏အပြည့်အဝစွမ်းရည်ကိုတိုစေသည်ဟုထင်သည်။ အဲဒါဟာမင်းရဲ့ပြproblemsနာအားလုံးကိုအံ့ solution စရာကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းလို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကွင်းဆက်တစ်ခုလိုမြင်တယ်။ မင်းမှာပြproblemsနာအများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့ကကွင်းဆက်တစ်ခုဖွဲ့တယ်။ သင်လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုဖြတ်ပြီးသည်နှင့်အခြားတစ်ခုကိုဖြတ်ရန်ပိုလွယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါလေ့ကျင့်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းရည်မရှိခဲ့ပါ၊ PMO ကိုဖြတ်တောက်သောကြောင့်စွမ်းအင်ပြန်ပေါ်လာပြီး၎င်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးမိမိကိုယ်မိမိစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်လိုချင်သောမိန်းကလေးအားလိင်နှင့်ချဉ်းကပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေသည်။ NoFap ကငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းခဲ့သလား။ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသွယ်ဝိုက်က ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ“ မကောင်းသောစိတ်ခံစားချက်သံသရာ” ၏မည်သည့်သံကြိုးကိုမဆိုဖြတ်တောက်ပါကအခြားသူများအပေါ်တိုးတက်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်း PMO သည်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ငါဖော်ပြရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးသေချာပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပြောတယ်, ကယခုငါ့ ဦး ခေါင်း၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရာအားလုံး, နှင့်နေဆဲစကားလုံးများကိုအပေါ်ထားရန်ကယ့်ကိုတကယ်ခက်ခဲ) ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ကြီးမားသောချည်နှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဤနေရာတွင်စာဖြင့်ရေးသားရန်စဉ်းစားထားခြင်းထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အချို့ကိုသင်အနည်းငယ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။
တနည်းကား, အင်္ဂလိပ်မစုံလင်သည်ဆိုပါစို့။ ဘယ်သူ့ကိုမှငါ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါအသေးစိတ်ပြောရရင်ပျော်ရွှင်မှုထက်ပိုပါတယ်။
by နောက်ထပ် Guy
ဟေ့လူတိုင်းအတွက်။ ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှစိတ်ခွန်အားနိုးပုံပြင်များအပေါငျးတို့သပြီးနောက်, ငါသညျငါ့ကိုယ်ပိုင်ဝေမျှဖို့တာဝန်ရှိသည်ဟုတာနဲ့တူခံစားကြရသည်။ မေလ 2017 ကတည်းကငါသည်ဤရေးသားဖို့လိုပါတယ်။ အခုတော့ငါဖြစ်၏, ထိုသို့ကောင်းသောခံစားရ၏။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ကဲ့သို့အခြားသူများကိုအမှုအရာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ကိုယ်ကိုရဲလာနေကြပြီဤမြင်ရပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်တယ်။ သင်ဤမှတဆင့်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင် recover ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါဆေးဘက်ဆိုင်ရာနောက်ခံ (ဆရာဝန်) ရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါကွဲပြားထောင့်ကနေဒီမှာလာကြ၏။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာငါ့အဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်စတင်ခဲ့ပြီးတစ်နေ့ကို 14-4x လောက်ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေဟာတင်းကြပ်လွန်းတယ် (အရမ်းတင်းကျပ်ပေမယ့်တစ်ခါတလေကောလိပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာငါ့ကို ok လိုခံစားမိစေခဲ့တယ်) Lifetime ရုပ်ရှင်တွေကိုစပြီးကျွန်တော်စကြည့်ခဲ့တယ်။ Lifetime အနမ်း / လိင်မြင်ကွင်းများသည်မှေးမှိန်သွားသောအခါ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော R ရုပ်ရှင်၊ iFC၊ Sundance ရုပ်ရှင်၊ ထိုအခါပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ HBO လာ၏။ ထိုအခါပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ softcore HBO ရုပ်ရှင်လာ၏။ ထိုအခါပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်း,5မိနစ် softcore porn ကိုကြည့်စတင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ကကဲ့သို့ပင် ၂၅-၃၀ မိနစ်ကြာမြင့်သောလိင်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူအမာခံများနှင့်ကောင်းမွန်သော choreographed softcore ရုပ်ရှင်ကားများကိုငါကြည့်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါမုသားမဟုတ်ဘူး ... ကကြီးခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၄ နှစ်မှစ၍ တစ်ဘီလီယံအထိတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပေမည်။ ငါလက်ချောင်းထိပ်မှာအပူဆုံးမိန်းကလေးများရှိသောကြောင့်, ငါရည်းစားရဖို့ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး ငါဟာနောက်ဆုံးရက် ၄-၅ နှစ်လုံးလုံးအချိန်ကာလနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါထာဝရလုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ် ပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကငါ့ကိုအာရုံစိုက်စေတယ်။ ဆေးကျောင်းကိုဝင်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာကတကယ့်ကိုအိပ်စက်ခြင်းပဲ။ Med ကျောင်းကိုယ်နှိုက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ပါကကျွန်ုပ်လေ့လာနေစဉ်တွင်ချိုသာလွန်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုအမြဲတမ်းရပ်တန့်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမပေးနိုင်ဘူး !!! အရမ်းလွန်းတယ် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည့်စာပေအားလုံးကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ပြောတာကဆီးကြိတ်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်ကောင်းဖြစ်သော်လည်း desensitization ဖြစ်နိုင်သည်။ အားလုံး BOOM သည်အထိကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ မေလ5။ ငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်မေလ 2017 ရက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းမရှိပါ။ ငါဟာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ငရဲအဖြစ်မရောက်ခင်ရက်အနည်းငယ်လောက်မှာကြာတတ်တယ်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိဘဲတစ်ရက်ပင်လျှင်ကောင်းသောဝန်တစ်မျိုးကိုတစ်ကိုယ်တည်းအာသာဖြေနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်အားတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည်။ သို့သော်မေလ 1 လိုက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကွဲပြားတယ်။ တစ်နေ့မှာ။ 2017 ရက်။ တစ်ပါတ်။2ပတ်။ ဘာမှမ ကျွန်တော်ချိုချိုသာမဟုတ် libido မရှိပါ နံနက်သစ်သားမရှိပါ။ ငါထိတ်လန့်သွားတယ် ငါအရမ်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီး ၃ ရက်တစ်ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကငါ့လိင်တံကိုတည့်မတ်ပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ Nope ။ ဘာမှမ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီငါးမတိုင်မီငါးလမပြည့်ခင်မှာပဲ၊ ငါကအခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာပါ။ ဇွန်လမှာတော့ငါစကားပြောနေတာကြက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်, အလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ သူမဟိုတယ်ကိုသွားပြီ။ သို့သော်လည်းငါသည်ကောင်းသောလမ်းဖြစ်၏ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတယ်။ ဘာမှမ ကျွန်တော့်ကောင်လေးသေသွားပြီ ဒါကငါ့အရင်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့ပါးစပ်ကတက်ရနိုင်, ဒါပေမယ့်တူ2စက္ကန့်။ ဒါပေမယ့်ငါမထိုးဖောက်နိုင်ဘူး သုည။ ငါ sooooo မကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ သူကကျွန်မတို့ကိုစကားပြောနေစေချင်တယ်လို့ပြောဖို့လုံလောက်တယ်။ အဲဒီအခြိနျမှာငါပွောငျးလဲရမယျဆိုတာသိတ ငါ3ပေါင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, ဖြည့်စွက်, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း, ဘာဝနာ, etc စသည်တို့ကို၏တန်ချိန်ယူ။ စသည်တို့ကို။ ငါ့လိင်တံတစ်နေ့လုံးစိတ်ထဲမှာပေါ်ခဲ့သည်။ ငါအားလုံးလူများ၏, ED ရှိခဲ့ပါတယ်။ မယုံ။ ငါဘယ်လောက်အထိကောင်းခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့အတူငါရှိနေခဲ့တဲ့အရင်ကကြက်ကလေးတွေကိုမှတ်မိသေးတယ်။ သေခြင်းတရားနဲ့တူတယ် ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ် ငါမကြာခဏငို (နှင့်ငါဘယ်တော့မှမငို), ငါကိုယ်တိုင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကုထုံးကိုမြင်တယ်။ ၃ လအကြာမှာကျွန်တော့်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်လကမှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်။ ငါ nofap မဟာဗျူဟာများလျှောက်ထားခဲ့သညျ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပေမယ်ထို့နောက်ငါတိုင်း 2-3 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ပြန်သွားကြသည်လိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံသေပြီအများဆုံးရက်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Long က flatlines ။ ငါလိင်ရှိသည်ဖို့ tadalafil မှရောကျလာ။ Tadalafil အချိန် 50% တူသောအလုပ်လုပ်ခဲ့, ထိုသို့ပြုကြ၏အခါသာငါမြင်နေခဲ့ယင်းနှင့်အတူ5မိကဲ့သို့အကြာရှည်လိမ့်မယ်။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာငါ penile implants လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့အပေါ့ ?? ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာသည်ငါ့ခေါင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြက်နဲ့ကျွန်မ ပို. ပို. မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်, ငါသူမဘာတစ်ခုမှ (ခေါ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်) ငါနှင့်အတူအလေးနက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသဘောပေါက်လာတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်မျက်စိမှမျက်စိမမြင်ရ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမိတျဆှေဇုန်၌ နေ. င့်ပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း, ငါ့ 1.5 yrs ၏ရည်းစားဟောင်းနဲ့ကျွန်မပြောနေတာခဲ့သညျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့3ရက်သတ္တပတ်အကြာအကြောင်းကိုအတူတကွပြန်မရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်အစဉ်အဆက်အကြီးမြတ်ဆုံးလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ 40 မိကြာမြင့်! NOTHING အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်လျှင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပညာရေး၏အဘယ်သူမျှမ7လအတွင်းရှိခဲ့လျှင်အဖြစ်။ အံ့သြဖွယ်အံ့သြဖွယ်အံ့သြဖွယ်။
ဇာတ်လမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရား nofap အကျင့်ကိုကျင့်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး porn ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့လိင်တံပြန်လည်ထူထောင်လိမ့်မည်။ ပြန်မရိပ်မိအောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါကသင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနှောင့်နှေးစေလိမ့်မယ်။ ED အများစုသည် MIND ဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်းနားလည်ပါ (ကျွန်ုပ်၏ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုကကျွန်ုပ်အားဤအရာကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ကြောင်းယခုငါနားလည်ပါပြီ။ ငါ၏အဟောင်း (ယခုလက်ရှိ gf) နှင့်ကြက်နှစ်ကောင်လုံးပူဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ gf နဲ့စိတ်ရောဂါခံစားမှုအဆင့်အတန်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါသလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ သူမ၏ထုံးစံကိုကြည့်ပါ။ သူမဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ မင်းကိုသူဘယ်လိုချစ်လဲ ဒါအရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏နံနက်သစ်သားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်ဆုံတွေ့ပြီးနောက် (lol) ပြီးနောက် libido သည်ပြန်လာပြီးလိင်တံကိုထိခိုက်စေသည်။ ငါအရင်ကလိုလောက်ကောင်းတယ် ဒါကကျွန်တော့်ကို (၇) လလောက်ကြာတယ်။ ဒါပေမယ့်ကွဲပြားတယ်။ အားတင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုဖတ်နေသည့်သင်ကဲ့သို့ပင်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပြောနေသည့်ဤအရာများအားလုံးကိုကြည့်ပါ၊ အဖြေကဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်။ အာရုံကြောများသည်အနာရောဂါပျောက်ကင်းရန်အချိန်ယူရမည်၊ သင်၏လိင်တံမှသင်၏စိတ်ကိုဝေးဝေးထားပါ။ သင်၏လိင်တံသည်ဤအရာကိုစဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးသင်၏အကူအညီမပါဘဲကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ မင်းရဲ့အရွယ်အစားကိုမိန်းကလေးတွေကဂရုမစိုက်ဘူး။ ၎င်းသည်လူတို့၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်အယူအဆဖြစ်သည်။ လူကောင်းဖြစ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကျန်းမာစေကြလော့။ ငါလိုပဲသင်ကုသနိုင်သည်။ ဘုရားသခင့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှစ်သစ်ကူး
မင်းထဲကတချို့ကငါ့ကိုသိကောင်းသိကြလိမ့်မယ်၊ ငါ့ရဲ့ post တွေကိုဒီမှာဖတ်ပြီးပြီ၊ ဒါပေမဲ့မင်းအများစုကတော့မသိဘူး။ ငါဟာဒီဖိုရမ်မှာအများအားဖြင့်အမှားကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတယ်၊ တခြားပုံပြင်တွေကိုဖတ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကိုငါနဲ့ဆက်စပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အသုံးဝင်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေရှာခဲ့တယ်၊ တစ်နေရာရာမှာမျှော်လင့်ချက်အနည်းဆုံးရှာခဲ့တယ်။ အခုအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ PMO ခရီးစဉ်မရှိသောနှစ်နှစ်ခန့် (၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၆ ရက်၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၃ နှစ်) ရှိပါကကျွန်ုပ်သည် porn, masturbation, flatlines နှင့်ထိပ်ဆုံး - PIED အားလုံးနီးပါးလွတ်ကင်းကြောင်းကြေငြာနိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်ငါစိုက်ထူဆေးဝါးတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်ခုကွန်ဒုံး, တခါတရံတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်နှင့်အတူလိင်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်မအံ့သြဖွယ်အချိန်ရှိခြင်းနှင့်တစ်ဦးအကြီးလိင်ဘဝကိုခံစားငါ့မိန်းကလေးကိုကြောက်, လိင်ကိုကြောက်မှာအားလုံးစိုက်ထူရှိခြင်းမဟုတ်ထံမှသွားလေ၏။ ထိုအမှုအရာတို့ကိုတိုးတက်မှုမစောင့်, ငါကပိုတိုးတက်မှုဖြစ်ကောင်းလာမည့်နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖို့မြျှောလငျ့။ ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် rewiring, စိတ်ရှည်, တစ်ဦးမာရသွန်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦး 100 မီတာပြိုင်ပွဲများမှာရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် REWIRE, REWIRE, REWIRE ။
ငါ reboot လုပ်တဲ့အချိန်မှာ O. O. ပြီးနောက် Flatline မှာနက်ရှိုင်းစွာကျလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတလေ O ပြီးနောက်မှာအနုတ်လက္ခဏာတွေရှိနေသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကဒေါသထွက်တတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံယားယံတတ်သည့်မျက်လုံးများ (တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်မျက်ခွံများကိုအသုံးပြုရသည်)၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်အိပ်ချင်လာသည်။ ဤအရာအားလုံးပိုကောင်းလာနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်လေးပြောပြလိမ့်မည်ကိုသိသောပေါ့ပါးသော POIS တစ်မျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ခံစားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကင်ဂရာဂါဆေးဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်သူတို့မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။
ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းဘဝမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. ,
1 ။ လူအပေါင်းတို့သည်အခက်အခဲများလျှောက်လုံးငါ့ကိုအနားမှာရပ်လျက်သူတစ်ဦးအကြီးအရည်းစားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
2 ။ medschool မှဘွဲ့နှင့်ယခုငါဆရာဝန်တစ်ဦးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေရှာငါလူတွေကိုကူညီ, ငါအဆင့်မြင့်သင်တန်းကိုဗြိတိန်မှရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
3 ။ ငါသည်ငါ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရတယ်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ကားအသစ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
၄။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်၏စစ်တပ်တွင်ဆရာ ၀ န်အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူသည်။
5 ။ ငါအသစ်သောအရာများ၏တန်ချိန်သင်ယူနှင့်အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုတယ်, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ကို လုပ်. , လုံးဝ5ဥရောပနိုင်ငံများတွင်သွားရောက်ခဲ့သည်။
6 ။ ကျွန်မပိုမိုနက်ရှိုင်းပိုပြီးပုလ်အသံနှင့်ပိုပြီးအမွေးဖြစ်လာခဲ့သည်, ငါ့ဝက်ခြံ, ငါ၏ရှက်ကြောက်စိတ်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုတင်ပြပါလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်အချိန်ရသောအခါသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုကျွန်ုပ်ဖြေဆိုပါမည်။ လွန်ခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပြန်ချိန်ကိုက်မှုထဲကိုမကြာခဏဝင်မလာတော့ဘူး၊ ငါမလိုတော့ဘူးလိုခံစားရတယ်
လူများစွာအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူ၏ပို့စ်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားပေးသောနေရာများဖြစ်သည်။ Gabe Deem, အရှုံးသမား, Charlie Marcotte, 40New30, dualwield, Recovered, New Man, RebornAgain, RebootNation မှယောက်ျားများ၊ ငါမမှတ်မိသောအခြားယောက်ျားများစွာ၊ ငါမမှတ်မိသောညစ်ညမ်းသောရောဂါများကိုသူမရဲရဲများ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမသိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါသင်သိထက်ပို။ သင့်ကိုကြွေးတင်နေသည်။
ငါအမှုအရာပင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်၏။ PMO မရှိဘဲဘဝကိုသာပိုကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မမကြာခဏ update လုပ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုကြပါစို့
LINK - ငါဤအပိုင်း၌ငါရေးသားခဲ့သည်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ထင် ...
ငါဖိုရမ်များကိုယခု ၇ လကြာဖတ်ရှုပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် (၃၁) နှစ်ရှိပြီး၊
ကို VHS တိပ်ခွေအပေါ် 14 ၏အသက်အရွယ်မှာ P ကိုစောင့်ကြည့် Started ။ ထိုအခါကွန်ပျူတာများအသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက် လာ. , ငါ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအကွိမျမြားစှာ tabs များ။
ငါဆိုးရွားတဲ့ ED နဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကြာဆက်ဆံခဲ့တာပါ။ ငါစိုက်ထူနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအများစုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ငါမအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအမှုအရာတွေအများကြီးကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါ 40 နှစ်အတွင်းမျှတတဲ့အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူ 88KG (2lbs) ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယခုနှစ်အနည်းငယ်အဘို့အလေးရုတ်သိမ်းရေးခဲ့တာ။ ရောဂါအဘယ်သူမျှမသမိုင်း။ သို့သော်နေဆဲ ED မတိုးတက်မှု။
တစ်ဦးဆီးလမ်းကြောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ED လူနာတွေအများကြီးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်, အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများနှင့်အတူအများအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, ကငါ့အဘို့စိတ်ပျက်စရာအရာ (YES ငါကမထင်မှတ်င်ကိုသိရ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဟော်မုန်းအဆင့်ကို (Normal) တိုင်းတာ။ အကြှနျုပျ၏ ultrasound ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်အခြားစမ်းသပ်မှုများနှင့်စာမေးပွဲပုံမှန်ခဲ့ကြသည်
ကျွန်မအပူတပြင်းတယ်။ ငါဗီတာမင်, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဒါဟုခေါ်တွင် ED အစားအစာ (ငါး, ပုစွန် etc) မျှကံကောင်းပါစေကြိုးစားခဲ့သည်။ တောင်မှ Tadalafil မိန်းမနှင့်နေစဉ်လိင်တံထဲမှာအသက်တာ၏လက္ခဏာမ 20mg ။ PMO ဒီတော့ငါအလျှင်းမ ORGANIZATION မှားသိတယ်နေချိန်မှာငါမရှိသလောက်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသည်ဤ site ကိုရှာတွေ့ခြင်းမပြုမီငါအသစ်တစ်ခုမိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အကြိမ်စုံတွဲ ထွက်. ငါသူမ၏ကျော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ (Tadalafil 20mg စဉ်) ကြှနျုပျတို့မှာအားလုံးဘာမျှမပါသေးတစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့အလှည့်ပတ်အရူးလုပ်။
ငါဆေးပညာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများသုတေသနပြုစတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မ Porn-သွေးဆောင် ED တွေ့ရှိခဲ့ငါကျယ်ကျယ်ကသုတေသနပြု။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆေးခန်း၌တူညီသောပြဿနာနှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာတစ်ဦးတိုးပွားလာတွေ့မြင်ကြဘူးကတည်းကပင်ဆေးရုံမှာငါ့အအကြီးတန်းပါမောက္ခအတူကဆွေးနွေးကြသည်။ သူတို့ကယုံကြည်တယ်မဟုတ်ကြခြင်းနှင့်ဘက်လိုက်နှင့် BS အဖြစ်ကပယ်ချခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်လည်းအပူတပြင်းကြီးကနောက်ကွယ်ကသိပ္ပံငါ့ထံသို့အသိကိုဖန်ဆင်းကတည်းကလေးနက်ပါပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါဖိုရမ်ရေးသားချက်များတွေအများကြီးဖတ်ပါနှင့် YouTube ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများအများကြီးစောင့်ကြည့်။
ငါငါ့အလိုရှိသမျှ porn စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတော်လေးအအေးကြက်ဆင်ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ အကြှနျုပျ၏မူရင်းအစီအစဉ်ခက်ခဲ mode ကို 90 ရက်နေ၏။ အဆိုပါဆန္ဒ MO ကိုပထမဦးဆုံးရက်အနည်းငယ်ပြင်းထန်သောခဲ့ပေမယ့်ငါတကယ် Porn လွဲချော်ဘူး။ ရိုးသားဖို့ငါကပိုခက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပေမယ့်ကိုယ့်စိတ်ကိုအတွက်မျှော်မှန်းအကျိုးအတွက်ထားရှိမည်သည့်အခါပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ကလေပြေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုစိန်ခေါ်အပေါ်နေဖို့မက်လုံးပေးအများကြီးပေးသော app ကိုရေတွက်ရက်ပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
၅၄ ရက်အကြာမှာ၊ ငါယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမကြုံတွေ့ရသော်လည်းစိုစွတ်သောအိပ်မက်များမရခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ပျက်မိသည်။ ဒါကြောင့်ငါ (P မှမဟုတ်) အတွေးများနှင့်အတူစိုက်ထူနိုင်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ရလဒ်ကတော့အံ့သြစရာပဲ၊ ကျွန်တော်ဟာအတွေးတွေနဲ့သာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ MO ကိုမတော်တဆအဆုံးသတ်လိုက်တယ် (နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရင်ငါမလုပ်မိစေချင်ဘူး) ။
ငါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမခံစားရဘူးငါအတှေးအချေါ (အကြိမ်ကြိမ် P ကိုဘယ်တော့မှမ) MO ကိုပေမယ့်ငါရက်ပေါင်း 120 မ Porn မရှိ, ပြီးစီးခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု (Pine Bark ထုတ်ယူမှုနှင့် 1.8grams L arginine) ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဖတ်ခဲ့သည်။ ငါသွပ် Orotate ထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ (တကယ်လို့ဒါကမကူညီဘူးဆိုရင်အဲဒါမှန်တယ်မဟုတ်လား?)
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ကျွန်မ4months ago ရက်စွဲပါအတူတူမိန်းကလေးနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်သွားလေ၏။ ငါနေဆဲ (ငါက Re-ဝါယာကြိုးဖြစ်စဉ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်ထင်) အနေနဲ့အာမခံပေါ်လစီသည်အဖြစ် Tadalafil 20mg ယူခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါရလဒ်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါစိုက်ထူရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့လက်၌ကျင်းပခဲ့သည်။ ငါ့အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ 3-2 နာရီအတွင်း3ကြိမ်အော်ဂဇင်နိုင်ခဲ့သည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိုက်ထူအတူ။
ကျနော်တို့အနည်းငယ်ပိုပြီးရက်စွဲများအပေါ်အကြိမ်စုံတွဲ ထွက်. အခြားမိန်းကလေးများနှင့်အတူ။ (10mg မှ Tadalafil လျှော့ချ) ။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ည 2-3 ကြိမ်အော်ဂဇင်နိုင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး BJ ရယူနေစဉ်ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခါတစ်ရံငါ့အစိုက်ထူဆုံးရှုံးပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါနောက်ကျောအိပ်ရာထဲမှာရပေမယ့်။
အခုရက်ပေါင်း ၂၀၀ ရှိပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်စိတ်ပျက်စရာတွေမရှိခဲ့ဘူး။ ငါဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ဘူး။ အဲဒါတကယ်မတန်ပါဘူး။
ငါပျောက်ကင်းသွားပြီလားမသိဘူး ငါ Tadalafil စားသုံးမှုကိုသုညအထိလျှော့ချဖို့ကြိုးစားမယ်။ ငါနောက်ပြန်ဆုတ်တော့မယ်လို့ယုံကြည်မိရင်အချိန်ပိုမှာအခြားဖြည့်စွက်ဆေးတွေကိုရပ်ပစ်ပါ။ စူပါပါဝါများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပွားတော်များပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်အသားအရေကြည်လင်ခြင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ကြုံခဲ့ပါ။
ဒါဟာဖိုရမ်အတွက်ဘာမှ post ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံကို posted သူကိုလူတိုင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုအမှောင်ကြိမ်မှတဆင့်ရတဲ့ကကူညီပေးခဲ့
NoFap အလုပ်လုပ်! ငါသည်ဤ post ကိုငါလအနည်းငယ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့လမ်းညွှန်မှုရှာနေသူတစ်စုံတစ်ဦးကကူညီလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပို့ရန် LINK - ဆီးရောဂါပါရဂူ NoFap အပေါ်ယူ: 200 ရက်ပေါင်းခရီးအောင်မြင်မှုရဲ့